Dowladda oo bilaabeysa qorshe looga hortegayo laba kacleynta COVID-19 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilka sii-haya Madi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xalay shir guddoomiyay kulan looga hadlaayay xakameynta cudurka halista ah ee COVID-19 oo soo kala kacleeyay.
Kulanka oo ay ka qeyb galeen golaha Wasiirada Xukuumadda ayaa waxaa diirada lagu saaray sidii looga hortegi lahaa faafida Cudurka COVID-19 oo siweyn ugu soo laba kacleeyay gudaha dalka Soomaaliya.
Sidoo kale inta uu socday ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday sida loo xoojin karo wacyigelinta dadka laga siinayo Cudurka, si uusan u faafin, waxaana dowladda sheegtay inay dib u bilaabeyso qorshaha looga hortegayo faafidiisa.
Wasiirka caafimaadka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr. Fowsiya Abiikar Nuur ayaa xustay in tirada kiisaska xanuunka ay sii kordhayaan, isla markaana ay muuqato soo labo kacleyntii labaad ee cudurka.
Sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka todobaadyadii u dambeeyay waxaa kordhay tirada kiisaska cudurka corona, iyadoo dhimasho badan la soo wariyay, sidoo kale waxaa jira bukaano badan oo la geeyay isbitaal De martini ee magaalada Muqdisho.